समाचार – Page 16 – TajaNepal
EnglishApril 19, 2019
शम्भुनाथ घिमिरे नेपाल बार एसोसेसनको चुनावमा पनि नेपाली कांग्रेस समर्थक वा प्रजातान्त्रिक पक्षधर कानून व्यवसायी पराजित भए । सबैतिर कांग्रेस अप्रिय हँुदै गएको मात्र होइन कि कांग्रेसले कतैतिर पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको र व्यवसायी समूहसित…
आर्थिकApril 19, 2019
त्यसै घटेको होइन अदालतको विश्वसनीयता काठमाडौं । नेपालमा हरेक समूहमा प्रवेश गरेको डलरको खेती सर्वोच्च अदालतमा पनि छ । जहाँ डलरको खेती गरेर आएका माननीय न्यायाधीशहरू छन् । नेकपा एमालेको तत्कालिन संगठनहरू डलरमा चल्थे ।…
बोर्ड, केयुकेएल र पीआईडीभित्र ब्रम्हलुट
बहसAugust 31, 2018
लुटाहादेखि खानेपानीमन्त्री सावधान ! काठमाडौँ । राजधानीका जनतालाई शुद्ध खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई कमजोर बनाएर उपत्यकामा खानेपानी मन्त्रालयको हस्तक्षेप जरुरी बन्दैछ । जहाँ गयो, त्यहाँ लुट मच्चाउने र बोर्डको पैसा निजी बैङ्कहरूमा…
नालायकलाई महानगरको प्रमुख बनाएको फल
आर्थिकAugust 31, 2018
असफल सिद्ध हुँदै काठमाडौँ महानगर काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरमा नालायक नगर प्रमुख बनाउने तत्कालीन नेकपा एमालेलाई अहिले लज्जित बनाएको हुनुपर्छ । एक वर्ष चार महिना पार गरेका काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सिन्को भाँचेनन् ।…
बादलकै काममा बढी हस्तक्षेप
समाचारAugust 31, 2018
काठमाडौँ । माधव नेपाल पार्टीको महासचिव बन्दाको समयमा कोटेश्वर पुगेर पत्रपत्रिका पढेर सुनाउने विष्णु रिमाललाई माधवकै कारण पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसम्म बन्ने अवसर जुट्यो । अहिले उनले कित्ता फेरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यिनैलाई राजनीतिक सल्लाहकार…
सुरक्षा संयन्त्रमाथि निगरानी
काठमाडौँ । सुरक्षा निकायको फौजी अनुशासनले सीमा नाघ्यो भने सिर्जना हुने अराजकताप्रति नेतृत्व सतर्क भएन भने संस्थाको उद्देश्य पूरा हुँदैन । अहिले निजामती सेवा अराजक छ । राज्य बलियो छ, सरकार शक्तिशाली छ तर जनताका…
एनसीसीविरुद्ध यस्तो चालबाजी
आर्थिकAugust 28, 2018
हरिसिद्धिको जग्गा कब्जा गर्ने लक्ष्मीको दाउ काठमाडौं । आफूलाई एनसीसी बैंकको जन्मदाता भन्ने लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठसमेतको टोली यतिबेला बैंकको हकप्रद शेयर जारी गर्न नदिन अदालत धाउन थालेको छ । संयोगवश श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च…
पाकिस्तानका देशभक्त प्रधानमन्त्रीको त्यो आँट
बहसAugust 28, 2018
सार्क राष्ट्रका शासकहरूलाई शिक्षा काठमाडौँ । भारतीय शासक पक्षको हेपाहा चरित्रका विरुद्ध नदब्ने देशभक्त पाकिस्तानी पुराना शासकहरूलाई नयाँ प्रधानमन्त्री इमरान खानले ठूलो शिक्षा दिलाएका छन् । खान क्रिकेट खेलाडी हुन् । राजनीतिमा यसरी सफलता मिल्ला…
यस्तो गम्भीर विषयमा सेना चुपचाप
जवानको रगत पसिना यसरी डुब्दै छ काठमाडौँ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नभएको कारण सुरक्षा निकायहरू आफैँ असुरक्षित रहेको कुरा अनमिनले व्यक्त गर्न थालेपछि लखेटियो । सुरक्षा निकायहरू र भवनहरू वरपर एक किमिको दूरी खुला…
सडकका पाँच डनको गाँड कोराकोर
त्यो रात यी थिए झिरिप्प ! काठमाडौँ । सडक विभागको मात्र होइन, उस्तै परे विभागका डीजी र मन्त्रालयका सचिवसम्म सरुवा गर्ने हैसियतका काँग्रेसका ठेकेदारहरू जिपछिरिङ शेर्पा, रमेश शर्मा, मोहन आचार्य, बहादुरसिंह लामा र राप्रपाका विक्रम…